ချစ်ဇနီးလေး ဆုပန်ထွာကို ရည်းစားဘဝထဲက အမြဲပြောခဲ့တဲ့ အမှတ်တရစကားလေးနဲ့ ဘယ်လောက်ထိချစ်လဲဆိုတာ ပြောပြခဲ့တဲ့ ဥက္ကာကျော် – Suehninsi
ချစ်ဇနီးလေး ဆုပန်ထွာကို ရည်းစားဘဝထဲက အမြဲပြောခဲ့တဲ့ အမှတ်တရစကားလေးနဲ့ ဘယ်လောက်ထိချစ်လဲဆိုတာ ပြောပြခဲ့တဲ့ ဥက္ကာကျော်
Sue | October 30, 2020 | ရသစုံ | No Comments
ဆုပန်ထွာ ကတော့ အနုပညာနယ်ပယ်မှာ အောင်မြင်နေတဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီးတွေထဲမှာ တစ်ယောက်အပါအဝင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုပန်ထွာက လက်ရှိမှာ သာယာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို တည်ဆောက်ထားပြီး သားလေးတစ်ယောက်ကိုလည်း မွေးထားပါသေးတယ်။ ယခုမှာတော့ ဆုပန်ထွာရဲ့ ခင်ပွန်းသည် ဥက္ကာကျော်က ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်အားကျစေရမယ့် ဇနီးသည်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့
အကြောင်းလေးကို ရေးသားဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ရဲ့ Facebook account မှာတော့ “မာမားရဲ့ Birthday တစ်ခုပြီးသွားပြီ…၁ပတ်လောက်ကျော်ရင် အားလုံးမေ့သွားကြပြီ…တကယ်တော့ Birthday တွေဆိုတာ အသက်၁နှစ်ထပ်တိုးလာတယ်ဆိုတာကို အထိမ်းအမှတ် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကျင်းပကြတဲ့နေထူးနေု့မြတ်လေးပါပဲ…..လူတွေဟာ မွေးနေ့တွေများလာတာနဲ့အမျှ အသက်အလိုက်
ပိုပြီးရင့်ကျက်လာကြတယ်….. အတွေးအခေါ်တွေနက်နဲလာကြတယ်…. ရုပ်ရည်ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံ ကျန်းမာရေးတွေ လူနေမှုအခြေအနေတွေ ဖြည်းဖြည်းချင်း ၁နှစ်ပြီး၁နှစ် ပြောင်းလဲလာကြတယ်….တို့၂ယောက်ရဲ့ကြားမှာ Roar Roar လေးတောင်ရောက်လာပြီး သူ့အသက်လေး ၄နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီ…..ပြောချင်တာ တို့၂ယောက်ရဲ့ဘဝအခြေအနေတွေ ဘာတွေဘယ်လောက်ပြောင်းပြောင်း ဘယ်သူတွေ
ဘာတွေပြောပြော တို့နှစ်ယောက် ဂရုမစိုက်ပဲ အဆိုးအကောင်း အနိမ်းအမြင့်တွေကြားက ခိုင်မာစွာလက်တွဲခဲ့ကြတယ်။ “ရည်းစားဘဝတုန်းကအမြဲပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတခွန်း..” အသက်တွေကြီးပြီးမလှတော့တဲ့အချိန်နုပျိုခြင်းတွေမရှိတော့တဲ့အချိန်အထိ သစ္စာရှိရှိဇွဲမရှော့ပဲ ဟိုမင်းသမီး (အန်တီအဒေါ်ကြီး အရွယ်ရောက်တဲ့အထိ) အရမ်းချစ်သွားမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှယုံတော့နော်… မင်းသမီးအခန်း၊ အမေအခန်း၊ အဖွားအခန်းထိ ဆက်ချစ်နေမယ်၊ စောင့်ရှောက်နေမယ်၊
စိတ်ပူနေမယ်….အခုတော့ ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက်တွေကြားက နေ့တိုင်း အမြဲတိုင်း I loved you, I love you, I will always love you မာမားရေ…ဘာရယ်တော့မဟုတ်ဘူး ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းတဲ့ မိန်းမကိုချစ်လို့… ချစ်တယ်လို့ရေးထားတဲ့စာလေးပါ။အရမ်းချစ်တယ် Supan Htwar ” ဆိုပြီး ရေးသားထားပါတယ်။ ပရိသတ်တွေလည်း ဆုပန်ထွာရဲ့ ခင်ပွန်ဖြစ်သူ စကားကြွယ်ကြွယ်နဲ့ ရေးသားထားတဲ့ စာလေးကို သဘောကျမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။
ဆုပနျထှာ ကတော့ အနုပညာနယျပယျမှာ အောငျမွငျနတေဲ့ ထိပျတနျးမငျးသမီးတှထေဲမှာ တဈယောကျအပါအဝငျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဆုပနျထှာက လကျရှိမှာ သာယာပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့ အိမျထောငျရေးကို တညျဆောကျထားပွီး သားလေးတဈယောကျကိုလညျး မှေးထားပါသေးတယျ။ ယခုမှာတော့ ဆုပနျထှာရဲ့ ခငျပှနျးသညျ ဥက်ကာကြျောက ပရိသတျတှေ ခဈြခငျအားကစြရေမယျ့ ဇနီးသညျနဲ့ ပတျသကျတဲ့
အကွောငျးလေးကို ရေးသားဖျောပွလာခဲ့ပါတယျ။ ခငျပှနျးဖွဈသူ ရဲ့ Facebook account မှာတော့ “မာမားရဲ့ Birthday တဈခုပွီးသှားပွီ…၁ပတျလောကျကြျောရငျ အားလုံးမသှေ့ားကွပွီ…တကယျတော့ Birthday တှဆေိုတာ အသကျ၁နှဈထပျတိုးလာတယျဆိုတာကို အထိမျးအမှတျ ပြျောပှဲရှငျပှဲကငျြးပကွတဲ့နထေူးနေု့မွတျလေးပါပဲ…..လူတှဟော မှေးနတှေ့မြေားလာတာနဲ့အမြှ အသကျအလိုကျ
ပိုပွီးရငျ့ကကျြလာကွတယျ….. အတှေးအချေါတှနေကျနဲလာကွတယျ…. ရုပျရညျခန်ဓာကိုယျဖှဲ့စညျးပုံ ကနျြးမာရေးတှေ လူနမှေုအခွအေနတှေေ ဖွညျးဖွညျးခငျြး ၁နှဈပွီး၁နှဈ ပွောငျးလဲလာကွတယျ….တို့၂ယောကျရဲ့ကွားမှာ Roar Roar လေးတောငျရောကျလာပွီး သူ့အသကျလေး ၄နှဈပွညျ့ခဲ့ပွီ…..ပွောခငျြတာ တို့၂ယောကျရဲ့ဘဝအခွအေနတှေေ ဘာတှဘေယျလောကျပွောငျးပွောငျး ဘယျသူတှေ
ဘာတှပွေောပွော တို့နှဈယောကျ ဂရုမစိုကျပဲ အဆိုးအကောငျး အနိမျးအမွငျ့တှကွေားက ခိုငျမာစှာလကျတှဲခဲ့ကွတယျ။ “ရညျးစားဘဝတုနျးကအမွဲပွောခဲ့တဲ့စကားလေးတခှနျး..” အသကျတှကွေီးပွီးမလှတော့တဲ့အခြိနျနုပြိုခွငျးတှမေရှိတော့တဲ့အခြိနျအထိ သစ်စာရှိရှိဇှဲမရှော့ပဲ ဟိုမငျးသမီး (အနျတီအဒျေါကွီး အရှယျရောကျတဲ့အထိ) အရမျးခဈြသှားမယျဆိုတာကိုအဲ့ဒီအခြိနျရောကျမှယုံတော့နျော… မငျးသမီးအခနျး၊ အမအေခနျး၊ အဖှားအခနျးထိ ဆကျခဈြနမေယျ၊ စောငျ့ရှောကျနမေယျ၊
စိတျပူနမေယျ….အခုတော့ ရနျဖွဈလိုကျ ပွနျခဈြလိုကျတှကွေားက နတေို့ငျး အမွဲတိုငျး I loved you, I love you, I will always love you မာမားရေ…ဘာရယျတော့မဟုတျဘူး ဘာသာတရားကိုငျးရှိုငျးတဲ့ မိနျးမကိုခဈြလို့… ခဈြတယျလို့ရေးထားတဲ့စာလေးပါ။အရမျးခဈြတယျ Supan Htwar ” ဆိုပွီး ရေးသားထားပါတယျ။ ပရိသတျတှလေညျး ဆုပနျထှာရဲ့ ခငျပှနျဖွဈသူ စကားကွှယျကွှယျနဲ့ ရေးသားထားတဲ့ စာလေးကို သဘောကမြယျလို့မြှျောလငျ့မိပါတယျ။
Source : Okkar Kyaw’s Facebook
မိန်းကလေးဆိုပေမယ့် အလုပ်ရော ဘာသာရေးကော မပျက်စေရဘူးဆိုတဲ့ သံသာမိုးသိမ့်